Wararka - Siyaabaha loo yareeyo isticmaalka bacaha
Dib u isticmaal bacaha balaastigga ah: dooro waxoogaa baagag adag ah kuna qaado boorsadaada si aad ugu adeegato boorsooyinkaaga halkii aad ka adeegan laheyd kuwa dukaanka la keeno.
Bacda dib loo isticmaali karo way fududahay in la qaado (waxay ku jiri karaan boorso yar ama xitaa jeeb!), Ilaa iyo intaad wax yar sidato, waxaad iibsan kartaa waxyaabo badan, laakiin sidoo kale waa la kala qaybin karaa, markaa ha keenin dhib nolosha. Bacaha wasakhda ah ee wasakhaysan ayaa loo isticmaali doonaa qashinka (ama waa la dhaqi karaa dibna loo isticmaali karaa), halka bacda nadiifka ah dib loo isticmaali karo dhowr jeer.
Looma haysto bacaha balaastigga ah: Guud ahaan, qasnajiyeyaashu waxay u egyihiin inay xirxiraan oo ay u ururiyaan lacag kaash ahaan. Ma aysan helin waqti ay ku weydiiyaan macaamiisha inay u baahan yihiin baco iyo in kale. Haddii aadan sidaas yeelin, maahan inaad aqbasho bacaha balaastikada ah, sida marka aad iibsaneyso waxyaabaha yaryar sida caano fadhi, cabitaanno, dawo, iwm. Ayaa sheegay in boorsooyinka iskuulka iyo boorsooyinka dhalada aysan noqon karin bagaashka wax lagu gado? Isticmaal bacaha dib loo isticmaali karo: qaado boorsadaada markasta.
Tiri Immisa bac oo aad isticmaashay: KA BAX! Ka fikir inta bac ee aad isticmaalayso maanta ama toddobaadkan. U sheeg hababkaan saaxiibbadaada iyo ehelkaaga, si dad badani ay wax ugu biiriyaan deegaanka.
Haddii aad wax u iibsaneyso waxyaabaha jilicsan sida ukunta, dooro dambiil yar oo ka samaysan geedka safarka, oo jawi u roon oo casri ah. Ku dukaamee bacaha dib loo isticmaali karo mar kasta oo ay suuragal tahay. Waxa kale oo jira boorsooyin qashin oo cas, jaalle, buluug iyo cagaar ah. Shaqooyinka ay boorsooyinkani ka hayaan suuqa ayaa badanaa loo isticmaalaa kala soocida qashinka.
Kala soocida qashinka waa mid aad muhiim u ah waxayna ku haboontahay adeegsiga qashinka dib loo isticmaali karo, qashinka guryaha badanaa waxaa loo kala qaadaa qashinka guryaha iyo qashinka dib loo soo ceshan karo, hadii ay tahay elektagagere galaas khatar ah oo aan isticmaali karno bacda qashinka cas, aan wax ku darsano dhulka.
U Bolts, Lag Bolts, Mashiinka tuuboyinka Gawaarida Gawaarida ah, Qaab dhismeedka, Gawaarida Gawaarida, Hex handarraabbadeedii,